विवाह (एकाङ्की) – मझेरी डट कम
कर्णकान्त : हाँसोले नै संसार थेगिने भए मान्छे हाँस्दै जन्मन्थे, हाँस्दै जिउँथे र हाँस्दै मर्थे होला । प्रेमसँग थोरै सम्बन्ध राखेर एकले पाउनु र अर्काले गुमाउनुको अर्को नाम नै विवाह हो ।
अभित : अब, अरूले गलत भन्दाभन्दै आफूले आफैँलाई ठिक भन्न मिलेन क्यारे ! यो कुरोचाहिँ साँचो हो कि मेरो जीवन तलमाथि भइदियो भने मेरा लागि दुई थोपा आँसु खसालिदिने यो पृथ्वीमा कोही छैन । यसको कारण हो— म सिङ्गो छु, सग्लो छु । म कतै बाँडिएकै छैन । सग्लो हतपत चोइटिँदैन, चोइटिएपछि दुई टुक्रामा मात्र विभक्त नभई अनेकानेक टुक्रामा विभक्त हुन्छ । विभक्त जीवन पनि कहीँ जीवन हो र ?
अभित : हुन्छन्, किन नहुनु ! बढेको, पढेको र आफ्नै खुट्टाले धर्ती टेकेको छोरो अकालमै सकियो भन्ने मातापितालाई हुन्छ । एक मनले अंश नै थपियो भन्लान् तर अर्को मनले दाजुभाइ पनि सुर्ताउलान् । चेलीहरू पनि माइती घट्यो भनी खिन्न होलान् । यी त स्वाभाविक कुरा हुन् तर मेरो भनाइ अर्कैतिर लक्षित थियो ।
पुण्य : बुझ्न सजिलो छ । सतीप्रथाको धङ्धङी मनमा राखिराख्यौँ भने नारीलाई पुरुषत्वको अहङ्कारले थिचिराख्यौँ भने अभित सरले भनेजस्तो विदुर/विधुवाको जीवन रोएरै बित्छ । मान्छेले मान्छेलाई पिँजडामा कैद गर्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ ।
कर्णकान्त : विवाहलाई महान् बनाउन नर–नारी दुवैले जीवविज्ञानको ज्ञान लिनुपर्छ । सफल भन्न सजिलो छ तर सफल जीवन बाँच्न गाह्रो छ । विवाहले नै कुनै पनि मान्छेको पूर्ण परिचय र चरित्रको गठन गर्छ । विवाह मान्छेको आनन्दको घडी हो या विनाशको सुरुआत हो ? त्यसको लेखाजोखा गर्ने काम दम्पतीको हो । अँझ म त भन्छु– विवाह भन्ने कुरा पुरुषका निम्ति समाप्तितिरको चरण हो भने महिलाका निम्ति आरम्भको चरण हो । विवाहले कुनै पनि वर्गमा सौभाग्य छाउनुपर्छ । यदि उसको वैवाहिक जीवन सौभाग्यशाली भएन भने उसको जन्म पनि व्यर्थ हुन्छ ।
पुण्य : म पनि यस कुरामा सहमत छु । अँझ म त भन्छु– विवाहपूर्व होस् यापश्चात् नर–नारी दुवै स्वतन्त्र हुनुपर्छ । दुवैले आ–आफ्नै दक्षता र क्षमताले बाँच्न पाउनुपर्छ । एकको अर्कोमाथि नचाहिँदो हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन्न । दुईमध्ये कसैको मृत्यु भए अर्काले पूर्णरूपेण स्वतन्त्र जीवन व्यतित गर्न पाउनुपर्छ । चाहे उसले पुनर्विवाह गरोस् या सधुवा जीवनको चालचलनमा रमाउन चाहोस्, त्यो उसको मौलिक हक हो । त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैको हुन्न ।
कर्णकान्त : विवाह यस्तो होस्, जसमा जातीय समानता नहोस् अर्थात् अन्तर्जातीय विवाह उत्तम हो । जीवनका हर आँधीबेहरीमा साथ पाउँदामात्र त्यो जोडी उत्कृष्ट ठानिन्छ । झट्टै फैसला गर्ने कुरा हैन विवाह । जाँचविचार गरेरमात्र विवाह हुनुपर्छ । विवेक, बुद्धि र इन्द्रियजन्य सुख पाउन दुई हृदय एक ठाउँ मिली सरितामा परिणत हुनुपर्छ । त्यो सरिता नै दुवैको मनको सरिता हो । कुशलतापूर्वक जीवन सञ्चालन गर्ने हो भने विवाह अनुपम प्रेम बन्छ । प्रेम गर्ने अनि त्याग्ने प्रवृत्तिबाट संसारमा कोही पनि सुखिरहन सक्तैन ।
अभित : मबाट संसारले लाभ लिन सक्छ । त्यस्तो लाभांशमा अनिष्टकारी स्वार्थ भने लुकेको हुनु हुन्न ।
कर्णकान्त : गर्नुस्–गर्नुस् । ‘करार–विवाह’ गर्नुस् । पृथ्वीको गर्भका वस्तुको भाउ त्यति अनमोल छैन, जति नारीको प्रेमभित्र बन्द पुरुषको छ । सुखमय वैवाहिक सम्बन्ध जीवनको नयाँ प्रारम्भ हो । पुरुष हुन विवाहपूर्व पूरा आँखा खोल्नुपर्छ तर विवाहपछि आधा आँखा चिम्लिनुपर्छ ।
(सबैजना उठ्छन् । अभितले सृष्टिलाई र सृष्टिले अभितलाई फूलमाला पहिर्याउँछन् । दुवैले एकअर्कासँग हात मिलाउँछन् । अरूहरूले ताली बजाउँछन् । पर्दा बिस्तारै खस्दै जान्छ ।)
मोवाइल नं : ९८४२८२९२०६